गलेम भीरमा गाडी चल्न थालेपछि स्थानीयवासी हर्षित
२५ भदौ, स्याङ्जा । स्याङ्जा जिल्लाको नै अति विकटको रुपमा र हे को गले म भीर खण्डमा पहिलो पटक सवारी साधन चल्न थालेपछि स्थानीय रामचन्द्र पौ डे ल खुसीले गद्गद् छन् ।
पर्यटकीय तथा कृषि उत्पादनको अत्यन्त सम्भावना बो के को उक्त गाउँमा सुविधाजनक गो रेटो बाटो नै नहुँदा पौ डे लजस्ता सयौ घरधुरी अन्यत्र ठाउँमा विस्थापित हुँदै आएका थिए ।
बजे टका लागि माँगी खाने भाँडो बन्दै आएको उक्त भिर खण्ड ट्रयाकलाई फे दीखो ला गाउँपालिकाले महत्वकाँक्षी यो जनामा समावे श गरेर काम संचार गर्दा पनि गले म राँप निवासी ७७ बर्षिय हिमादे वी पाध्या पौ डे ल ट्रयाक विस्तार मा त्यति विश्वस्त थिइनन् ।
तर फे दीखो ला गाउँपालिकाले आफ्नो पाँचबर्षिय कार्ययो जनालाई दुई बर्षमा छो ट्याएर भिर छिचो ल्दै गाउँमा नै सडक पु¥याएपछि पौ डे ल जस्तै सयौ स्थानीयले विकासको अनुभुति गरेका छन् । ‘बजे ट ल्यायो , तलतिर को बाटो पुर पार गर्यो , टालटुल गर्यो , सिद्धियो,’ विगतका समितिका काम गर ाईको अनुभव सुनाउँछन् गले मका ६० बर्षिय यामबहादुर गुरुङ ‘यति चाँडो बाटो खो लिएला भन्ने विश्वास नै लागे को थिएन ।’
बाटो निर्माणपछि आफुँहरुलाई अन्धकार बाट उज्यालो युगमा आए जस्तो महसुस भएको उनी बताउँछन ।
उक्त सकेर् टार ी गले म पञ्चासे सडक खण्डलाई १ करोड ६८ लाख बिनियो जित भएको मा १ करोड २७ लाखमा आयो जना सम्पन्न भएको थियो । जसमा स्याङ्जा क्षे त्र नं. १ का साँसद नारायण मरासिनीको साँसद क्षे त्र विकास को ष अन्र्तगत ४० लाख र गण्डकी प्रदे शबाट ६२ लाख र फे दीखो ला गाउँपालिकाले २५ लाख बढि बजे ट विनियो जन गरेको थियो । उक्त यो जना सम्पन्न गर्नका लागि गाउँपालिकाले पहिलो आर्थिक बर्षदे खि नै प्रदे श र संघमा निर न्तर पहल गदैर् आएको थियो ।
बाटो को उद्घाटन गदैर् गण्डकी प्रदे शका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्षौदेखि हुन नसके का विकासका गतिविधीलाई तीब्रता दिन संघीयता आवश्यक र हे को बताए ।
सर कार ले चाहे र मात्र विकास निर्माण नहुने भन्दै समृद्धिको लागि जनसहभागिता अपरि हार्य र हे को उनको तर्क थियो । ‘गले म भिर खण्डमा झण्डै ८० लाखको लागत सहभागिता दे ख्दा यहाँका जनता विकास निर्माणप्रति कति चिन्तित र जागरुक छन, प्रष्टै दे खिन्छ । बाटो निर्माणमा स्थानीयको सक्रियताले आफूलाई प्रभावित पारेको भन्दै उक्त गले म भीर खण्डलाई बहुबर्षिय यो जनामा लै जाने मुख्यमन्त्री गुरुङले आश्वासन दिए । स्याङ्जा क्षे त्र नं. १ का प्रतिनीधि सभा सदस्य नारायण मरासिनीले तो किएको समय अगावै विकट भीर छिचो ल्न सफल भएको भन्दै गाउँपालिकाप्रति आभार प्रकट गरे ।
गण्डकी प्रदे शसभा सदस्य मिनप्रसाद गुरुङले संघीयतासँगै गाउँगाउँमा विकासको लहर छाएको बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जा प्रमुख सिता सुन्दासले अति भौ गो लिक क्षे त्रमा ट्रयाक विस्तार गरि एको मा खुसी प्रकट गरि न् ।
उद्घाटन समारोहमा ने कपा प्रदे श सदस्य शै ले न्द्र घिमीरे, ने पाली काँग्रे स फे दीखो ला गाउँपालिका वडा नं. ४ का नारायण प्रसाद पौ डे लले भीर खण्डमा ट्रयाक विस्तार गर्न सफल भएको मा स्थानीयवासी, उपभो क्ता समिति तथा गाउँपालिकालाई धन्यवाद प्रकट गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बो ल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवे दीले विकास निर्माणले कुनै पार्टी विशे षलाई नभई सबै लाई फाइदा पुग्ने बताउँदै यसमा राजनीति नगर्न आग्रह गरे । राजनीतिक आग्रह–पुर्वाग्रहका कार ण वाटो विस्तार मा के ही समस्या पै दा भएको उनको तर्क थियो । उपभो क्ता समिती र स्थानीयको जागरुकताले विकास वाटो विस्तार गर्न सफल भएको भन्दै सुवे दीले स्थानीयवासीलाई आभार प्रकट गरेका थिए ।
भीर खण्ड विस्तार मा महत्वपूर्ण भूमिका खे ले को उपभो क्ता समितिले उद्घाटन कार्यक्रमको संयो जन गर े को थियो । समितिका अध्यक्ष मे जर डिलबहादुर गुरुङले स्थानीयको चासो र सहयो ग, गाउँपालिकाको सक्रियता र पहलका कार ण दुर्गमलाई सुगममा परि णत गर्न आफुहरु सफल भएको बताए । अति विकट उक्त भिर लाई छिचो ले र साहसिक काम गर्न सफल भएको भन्दै डो जर अपरेटर दीपक ने पालीलाई गाउँपालिका, आमा समुह तथा क्लबले सम्मान समेत गरे को थियो ।